बन्देवी मन्दीरका जोगिहरु बिच भिडन्त, एकको मृत्यु, हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा एक पक्राउ
अर्जुन सिंह ठकुरी । काठमाडौं । माघ २७ । कञ्चनपुको एक मन्दीरमा जोगिहरु बिच भिडन्त हुंदा एक जोगिको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार साँझ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा
नेविसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्व सुशिल कोइरालालाई नेताहरुले यसरी स्मरण गरे
काठमाडौं । माघ २७ । नेपाल विद्यार्थी संघ प्रदेश नं ३ ले पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका पुर्व सभापती स्व शुसिल कोइरालाको दोस्रो स्मृति सभा गरेको
सिंचाई सचिब चढेको जिप आज विहान त्रिशुली नदिमा खस्यो, चालक घाइते, सचिब सहित तिन बेपत्ता
काठमाडौं । माघ २७। सिंचाई मन्त्रालयका सचिब चढेको जिप आज बिहान त्रिशुली नदिमा खस्दा सचिब सहित तिन बेपत्ता भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादव, छोरा संजय
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको ४ वटा जन्ममिति !
कृष्ण ज्ञवाली काठमाडौं । माघ २६। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति थप विवादित बनेको छ । उनको शैक्षिक अभिलेख रहने निकायमा दुई फरक जन्ममिति भेटिएको थप अर्को जम्ममिति खुलेको हो ।
नुवाकोटको थान्सीङमा भिरबाट लडेर मृत्यु
नुवाकोट ।२६ माघ । नुवाकोटको लिखु गाँउपालीका ५ थान्सीङभा भिरबाट लडेर एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा लिखु गाँउपालीका ५ थानसिङ बस्ने ५५ वर्षीय
ठमेलको डिस्कोमा धारीले हतियार प्रहार गरी १६ बर्ष अघि युवकको हत्या गरेका अभियुक्त दिल्लीबाट पक्राउ
काठमाडौं । माघ २६। १६ बर्ष अघि ठमेलको डिस्कोमा धारीलो प्रहार गरी युवक हत्या गरेको अभियोगमा जन्म कैद फैसला भएका अभियुक्त भारतको जयपुरमा पक्राउ परेका छन्
अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिष्पर्धाबाटै स्थायी प्रक्रियामा लगिने उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । माघ २६। उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वत्तः स्थायी हुने सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन् ।अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिष्पर्धाबाटै स्थायी प्रक्रियामा लगिने स्पष्ट पार्दै
प्रधानन्यायाधीका प्रमाणपत्र डा. केसीले बुझे
काठमाडौं । माघ २६। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा छानबिनको माग गर्दै अनशनमा बसेका डा‍. गोविन्द केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाट सबै प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझेका छन्।
कार्यक्रम आयोजनक र कलाकारको सेटिङमा बिदेशमा मानव तस्करी हुने गरेको खुलासा, खडगी पक्राउ, दर्जनौ कलाकारबिरुद्ध सिआइबीमा उजुरी
काठमाडौं । माघ २६। बिदेशमा हुने बिभिन्न कार्यक्रमको बहानामा नेपालबाट मानव तस्करी हुने गरेको खुलासा भएको छ । बिदेशमा हुने कार्यक्रममा लाखौं रुपयाँ असुल गरेर नेपालबाट
फागुनको दोस्रो साता भित्र नयाँ सरकार बन्ने
काठमाडौं,माघ २६ : ढिलोमा फागुन २ भित्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सम्पूर्ण नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारीसँगै फागुन १० भित्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ। राष्ट्रियसभा
नेपालमा खुला विश्वविद्यालयले अर्को महिनादेखि पढाई सुरु गर्ने
काठमाडौं । माघ २५। नेपाल खुला विश्वविद्यालयले अर्को महिनादेखि पढाई सुरु गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयको बुधबार बसेको पहिलो सभाले विभिन्न संकायको ६८ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
तारकेश्वरमा फेरी चोरी
काठमाडौं । माघ २५ । काठमाडौंको तारकेश्वरमा चोरीका घटना बढन बढेको छ । तारकेश्वरमा आज फेरी झण्डै ४ लाख रुपयाँको धनमाल चोरी भएको छ । तारकेश्वर नगरपालिका–६
संसदमा हिन्दिमा सम्बोधन गरेको भन्दै मधेशी युवाले जलाए नेताको पुत्ला
काठमाडौं।माघ २५ ।प्रदेश नम्बर २ को माघ २१ गते सम्पन्न पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्नो मातृभाषा छोडेर हिन्दीमा सम्बोधन गरेको भन्दै विरोधमा युवाहरूले सांसदहरूको पुत्ला
नेपाली सेनामा १ सय ५० अधिकृत क्याडेटका लागि तिन पटक पटक बिज्ञापन गर्दामा पनि २७ जना उत्रिर्ण ,५ हजार परिक्षार्थीमा १८ मात्रै पास !
काठमाडौं,माघ २५ : नेपाली सेनाले रिक्त रहेको अधिकृत क्याडेट भर्नाका लागि यस बर्ष दुईपटक भर्ना आह्वान गर्दा पनि माग गरेको संख्या पूर्ति गर्न सकेन । मुलुकभर शैक्षिक
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सवै परिणाम आयो, को को भए निर्वाचीत ?(निर्विरोध भएकाहरु समेत)
काठमाडौं । माघ २५ । प्रतिनिधिसभाको माघ २४ गते भएको मतदानको सवै परिणाम आएको छ । ६ वटा प्रदेशका ३२ राष्ट्रियसभा सदस्यका सिटका लागि मतदान भएको
Date : 07 Feb 2018
यी हुन् प्रदेश ७ बाट राष्ट्रियसभामा विजयी ८ सांसद
माघ २४, डोटी राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि प्रदेश ७ मा भएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। बुधबार सम्पन्न निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार महेशकुमार महरा र
नेपाली सेनाको पहिलो महिला गुल्मपतिमा ‘मेजर सृष्टी खड्का’
काठमाण्डौं, २४ माघ ।देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा महिला आसिन छिन्। प्रधान्यायाधिशमा पनि नेपालले पहिलो पटक महिला पाइसकेको छ। सदनभित्र सभामुख पद पनि महिलाकै हातमा छ। यो सुखद
राष्ट्रिय सभा सांसदहरुका लागि आज(बुधबार)भएको चुनावको मतगणनासुरु
काठमाण्डौं, २४ माघ ।राष्ट्रिय सभा सांसदहरुका लागि आज(बुधबार)भएको चुनावको मतगणना थालिएको छ । प्रदेश ७ र ६ मा मतगणना थालिएको छ । प्रदेश–७ मा दलित र अल्पसंख्यक गरी
काठमाडौं । माघ २४ । गाँउमा बैंक नहुँदा भुकम्प पीडित हैरान भएका छन् । अधिकांश बैंकहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ कारोबारबाट वञ्चित झै भएपछि भुकम्प
ताइवानमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा दुईजनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। २०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थानीय समय अनुसार राति ११ बजेर ५० मिनेट जाँदा टापुको पूर्वीतटदेखि
विपन्न बस्तीमा हर्षको सीमा छैन
काठमाडौं । माघ २४ । ‘सहरतिर घुम्न जाँदा मनको कुनामा यस्तो घर आफ्नो पनि भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो,’ पुस्तौंदेखि फोहोर छाप्रोमा जीवन गुजार्दै आएकी १०६ वर्षीया रमकलिया
यस्ता आईक्यु (IQ) प्रश्नहरु हेर्दा सामान्य हुन्छन् । तर यस भित्रको रहस्य बुझ्न निकै कठिन हुन्छन् । प्रश्न झट्ट हेर्दा बच्चाको खेल जस्तो लाग्छ । तर
ललितपुरको टिकाथलीको घरमा भुतले तर्साउने गरेको भन्दै अफबाह फैलाएको पुष्टी, प्रहरीको सिआइवी टोलीले घटनाको छानबिन गदै
काठमाडौं । माघ २४ । ललितपुरको टिका थलीको एउटा घरमा बारम्बार भुतले तर्साएको भन्दै न्युज २४ टिभिको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासंगमा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि हंगामा मच्चीएको
काठमाडौं । माघ २४ । भक्तपुरमा पाँच बर्षिया एक बालीका बलत्कार भएकोे पन्ध्र दिन पछि अविभावकले बलत्कारी बिरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् ।भक्तपुर नगरपालिका १० कमलविनायककी
राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि ६वटा प्रदेशमा आज निर्वाचन हुंदै, निर्वाचित पदाधीकारीको पदावधी भने गोला प्रथाबाट !
काठमाडौं । माघ २४ । राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि आज ६ प्रदेशमा निर्वाचन हुंदैछ । चुनावका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले हिजो पत्रकार सम्मेलन
Pages 564 : You are at page 462 of 564